26 | March | 2015 | OromianEconomist
Oromedia : Seenaa Jaal Abdiisaa Hayilee (1986-2015). #Oromo. #Oromia March 26, 2015
Tags: Because I I am Oromo, Genocide against the Oromo, Oromummaa, Seenaa Jaal Abdiisaa Hayilee (1986-2015), The Tyranny of Ethiopia
Jaal Bunguli (Abdiisaa) Hayilee abbaa isaa obboo Hayilee Dagabaasaa Camadaa fi haadha isaa Aaddee Muluu Daammanaairraa Caamsaa 14/1986 A.L .O. ti Godina Shawaa Lixaa Aanaa Jibaat ganda Gaamoo Hadaadiitti dhalate. Yeroo umuriin isaa barnootaaf gahutti, barnoota isaa sadarkaa 1ffaa achuma aanaa Jibaat mana barumsaa iichaa hadaadiitti xumure. Barnoota isaa sadarkaa 2ffaa mana barumsaa shanan sadarkaa lammaffaatti barachuun qormaata biyyoolessaa(kutaa 10ffaa) qabxii giddugaleessaa galmeessissuun gara kolleejjii teknikaa fi oggummaa Ambootti ogummaa seeraa barachuu eegale. Ogummaa seeraa baratee osoo jiruu carraa hojii waan hin arganneef ogummaa dhuunfaa isaa hojii ijaarsaa garaa garaatiin biyyoota adda addaa deemee hojjachuu eegale. Jaal Abdiisaan nama qajeelaa dhaabbii fi ilaalchi isaa namatti tolu ture. Hawaasa naannoo isaa biratti taphataa kubbaa milaa cimaafi farda gulufuun beekama. Jaal Bunguli (Abdiisaa) bara 2014 yeroo ummanni Oromoo daangaa lafa Oromiyaa falmatu mirga saba isaatiif nama of kennee falmaa turee dha. Sababa kanaanis hiriira seeraan alaa gaggeesite; jeequmsaaf ummata kakaafte jedhamee yeroo dheeraaf hordofamaa ture. Innis hordoffiin itti hammaannaan bakka jireenyaa jijjirachuun jiraataa ture. Yeroo keessa haalli tasgabbaa’eera jedhee Ayyaana Irreechaa kan magaalaa Bishooftuutti kabajamuu kabajee gara maatiisaatti galuuf osoo deemaa jiru, osoo maatii isaa bira hingahiin magaalaa Shanan ganda 01 tti gafaa guyyaa 05/10/2014 to’annaa poolisii jala oole. Poolisiin toánnaa jala isa oolches guyyaa lamaaf achuma magaalaa Shanan waajjira poolisii tursuun guyyaaa torba booda gara waajjira qajeelcha poolisii G/Sh/Lixaa Ambootti dabarse. Achittis qorannaa guddaa erga irratti raawwatanii booda gara mana sirreessaa Ambootti dabarsuun hiriyyoota isaa otuu mirga saba isaaniif falmanii diina harka buánitti makame. Jaal Abdiisaan yeroo qorannoo poolisii jala turetti hedduu reebamaa ture. Qaamni isaa hedduu miidhamee ture. Yeroo heddduu kan mana hidhaa keessatti dubbataa tures, waaée miidhamuu isa aotuu hin taane akkamiin akka sabni Oromoo bilisummaa isaa deebifatee goonfatu akn ibsu ture. Yeroo mara kan inni dubbatu, “diinni kan hidhu qaama keenya malee yaada keenya miti; yeroo amra waa’ee bilisummaa keenyaa yaaduu dhiisuu hin qabnu,” jedhaa ture. Waa’ee reebichaa fi hiraarsaa yeroo dubbatus, “namni bilisummaa barbaadu reebicha himatuu hin qabu; gatiin bilisummaa olaanaa dha,” jechaa akka ture hiriyyoonni isaa ragaa bahu. Reebichi Jaal Abdiisaa irra gahe garuu oolee bulee isa miidhuu hin dhiifne. Yeroo hedduu gara mana yaalaa akak geessan iyyatus, manni yaalaa deebii kennuufii dide. Erga inni miidhamee du’a jala gahee booda garuu, gaafa guyyaa 14/03/2015 gara hospitaala Ambootti geeffame. Yeroo geeffame sanatti hedduu hubamee waan tureef akka irraa hin hafne ni beekama ture. Namoota isa gaafachaa turanittis akka dhibee gidiraa irraa itti dhufe irraa hin fayyine itti himaa ture. Keessayyuu, kaayyoo haqaaf falmuun itti fufuu akka qabu dubbataa ture. “Mootummaa gabroofataan nama ofitti amanu hin jaalatu; motummaanni Habashaas sabni keenya akka doofaa taée hafu barbaadu. Kan dide immoo kaan biyyaa ari’uun akka baqataa taú godhan; kaan immoo qabanii mana hidhaatti gidirsuun achuman ajjeessan. Kun har’a miti, kan eegale. Kaleessas nurra ture; har’a illee kunoo aadaa ta’ee nu nyaachaa jira. Sabni keenya qabsoo isaa itti fufuu malee fala biraa hin qabu,” jechaa ture. Abdiisaan dhibee gidiraa irraa itti dhufe irraa otuu hin dandamatiin akkuma kaateenaan hidhametti gaafa guyyaa 17/03/2015 osoo beellama mana murtiitti deddeebi’u hin xumuratiin, murtee dabaa gaaffii bilisummaa isaatiif isatti kannameef ture otuu hin argatiin lubbuun isaa ganama keessaa sa’a 6:00 irratti bakka haati manaan isaa hin jirretti maatii isaa harkatti umurii 29 tti biyya lafaa irraa boqote. Gootichi Oromoo, Jaal Abdiisaan (Bunguliin) yeroo lubbuun keessaa bahuuf jirtutti akkas jedhee barattota Oromoofi ummata Oromoo maraaf dhaamsaa dabarse.